ဒါဟာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ပဲ! Metatrader မှာ အရောင်းအဝယ်အော်ဒါတွေ ဘယ်လိုဖွင့်ရ၊ ပိတ်ရမလဲ သင် လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ခုဆို Forex ဈေးကွက်မှာ ရောင်းဝယ်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ - ဝယ်မလား၊ ရောင်းမလား? အဖြေတစ်ခု ရှိပါသလား?
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ရှိပါတယ်! အနာဂတ်မှာ ငွေလဲလှယ်တဲ့နှုန်းတက်လာမယ်လို့ သင်ထင်တဲ့ ငွေကြေးကို သင်ဝယ်ထားပြီး၊ ဒီဈေးကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိရင်တော့ သင်ရောင်းလိုက်တယ်။
ဒီလိုဟောကိန်းမျိုးထုတ်ဖို့ ကြည့်သင့်တာ နှစ်ခုရှိပါတယ် - Metatraderရှိ ဇယားတစ်ခုနှင့် စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်။ အောက်တွင် Forex ဈေးကွက်ကို ဘယ်လိုသုံးသပ်ရမလဲနှင့် အမြတ်နဲ့ ဘယ်လိုရောင်းဝယ်မလဲဆိုတဲ့ အမြန်လမ်းညွှန်ကို ရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံသုံးသပ်ချက်များ အကူအညီနဲ့ ဝင်ငွေဘယ်လိုရှာမလဲ?
အခြေခံသုံးသပ်ချက်ဆိုသည်မှာ ခက်ခဲမောပန်းတဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အခြေခံဆိုတာ ရိုးရိုးလေးပဲ 'စီးပွားရေး'လို့ သုံးလိုက်တာပါ။ စီးပွားရေး အခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုရင်၊ အားလုံးတန်းတူ၊ ယင်း၏ငွေကြေးလဲ တန်ဖိုးတက်လာလိမ့်မည်။
EUR နဲ့ USD ယှဉ်ပြီး အနာဂတ်တန်ဖိုးအကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းရမည်ဆိုရင် ယူရိုဇုန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စီးပွားရေးကိုနှိုင်းယှဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်: ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းနေသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုငွေကြေး ခိုင်မာလာလိမ့်မည်။ ဥပမာ တူညီတဲ့ကာလအတွင်း အမေရိကန်စီးပွားရေး ၂%တိုးလာစဉ်၊ ဥရောပစီးပွားရေး ၀.၅% မြင့်တက်လာတယ်လို့ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ အင်အားသည် လုံးဝအရှင်းကြီး အမေရိကန်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွက် ရောင်းဝယ်သူများက EUR ကို USD နဲ့ယှဉ်ရင် ဈေးကျလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြပါလိမ့်မည်။ ဒီဈေးအကျမှာ အမြတ်ရရန်၊ သူတို့ EUR/USD ကိုရောင်းပါလိမ့်မည်။
နေ့တိုင်း ကမ္ဘာ့အရေးကြီးဆုံး နိုင်ငံများသည် သူတို့၏စီးပွားရေး စာရင်းဇယားများကို ထုတ်ပြန်နေပါသည်။ ဤထုတ်ပြန်ချက်များပါတဲ့ ပြက္ခဒိန်၊ သူတို့အတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အမှန်တကယ်ထွက်လာသည့် ကိန်းဂဏန်းများကို စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန် တွင်သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးနေမယ်ဆိုရင် များပြားလှတဲ့ အရောင်းအဝယ် အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေရပါလိမ့်မည်။
တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ! မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ အမေရိကန် ကိန်းဂဏန်းကောင်းနေစဉ်အတွင်း၊ ဗြိတိန် အညွှန်းကိန်းသည် ခန့်မှန်းချက်အောက်တွင် ထွက်လာပါသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ GBP/USD က အဲ့ရက်အတွင်း ဈေးကျသွားခဲ့သည်။ အရောင်းဖွင့်ပြီး၊ အမြတ်ရယူပါ!
နည်းပညာသုံးသပ်ချက်ကို အသုံးပြုပြီး ငွေဘယ်လိုရှာမလဲ
နည်းပညာသုံးသပ်ချက်ဆိုတာ ထင်ထားတာထက် ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ သချာင်္ (သို့) စက်ပညာ ဗဟုသုတ မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကတော့ မျဉ်းတွေဆွဲပြီး၊ အညွှန်းကိန်းများကို စောင့်ကြည့်ဖို့ပါ - သင့်ကားရဲ့ အမြန်နှုန်းအတိုင်းအတာကို ကြည့်တဲ့ပုံနဲ့ အလားတူပါပဲ။
အဓိက စည်းမျဉ်းကတော့ သင်က အနိမ့်မှတ်တွေမှာဝယ်ပြီး၊ အမြင့်မှတ်တွေမှာ ရောင်းတာပါပဲ။ ထို့အပြင် ဈေးလမ်းကြောင်းဆိုတာ သင့်မိတ်ဆွေပါပဲ။ အချိန်အတော်အတန်အတွင်း ဇယားတစ်ခုက - အထက် (သို့) အောက် - ဦးတည်ရာတစ်ခုထဲရွေ့နေတဲ့အခါ ဈေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ရောင်းဝယ်သူများသည် အတက်ဈေးအတွင်း ဝယ်ပြီး အကျဈေးအတွင်း ရောင်းပါသည်။ အတက်ဈေးလမ်းကြောင်းသည် ဈေးနှုန်းမှ တသမတ်တည်း ပိုမြင့်လာတဲ့အနိမ့်တွေနဲ့ မြင့်သထက်မြင့်လာတာတွေကို သတ်မှတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းမှ ပိုနိမ့်သွားတဲ့ အမြင့်တွေနဲ့နိမ့်သထက်နိမ့်လာတဲ့ အတွဲတွေကို ဖြစ်စေတဲ့အခါ အကျဈေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အကျဈေးလမ်းကြောင်းရဲ့ ဥပမာကို အောက်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီပုံထဲမှာ လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲ ရောင်းဝယ်သူများ ဇယားအမြင့်တွေနဲ့ အနိမ့်တွေကို trendlines လို့ခေါ်တာနဲ့ အမြဲလိုလိုချိတ်ဆက်ကြတတ်ပါတယ်။ အမြင့်နှစ်ခုကို အကျလိုင်း (အမှတ် ၁နှင့် ၂)နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ ဒါဟာ downtrend လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာသုံးသပ်ချက်သည် နောက်တစ်ကြိမ် ဒီလိုင်း (အမှတ် ၃)ကို ဈေးနှုန်းထိတဲ့အခါ၊ ပြန်ကျသွားပြီး သင်ရောင်းချနိုင်မှာပါ။ အမှတ် ၄ - ၅မှာ သင့်အရောင်းအဝယ်ကို ပိတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ သင်အသုံးချလို့ရမည့် နည်းပညာတွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြတ်ရနိုင်ရန် ရွေးချယ်မှုများပိုရှိစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သရုပ်ပြသင်ခန်းစားများ ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
ဘယ်သုံးသပ်ချက် အမျိုးအစားကို သုံးရမလဲ?
ယုတ္တိတန်တဲ့မေးခွန်းဟာ အခုဆိုဘယ်အချိန်မှာ အခြေခံကိုသုံးမလဲနှင့် ဘယ်အချိန်မှာ နည်းပညာသုံးသပ်ချက်ကို သုံးမလဲ။ အခြားသူများက သူတို့က အောင်မြင်မှုအတွက် ဈေးနှုန်းဇယားသာလိုအပ်သည်ဟု ခံစားကြပေမယ့် ရောင်းဝယ်သူအချို့ဟာ စီးပွားရေးသတင်းတွေပေါ်မှာပဲ ရောင်းဝယ်ကြပါတယ်။ သုံးသပ်ချက်နှစ်မျိုးလုံးကတော့ ကောင်းကျိုးကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးဆီမှ အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုရယူဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုလဲ ရှိပါတယ်: စီးပွားရေးသုံးသပ်ချက်၏ အကူအညီနဲ့ အဝယ်၊ အရောင်းရွေးပြီး၊ MetaTrader နည်းပညာကိရိယာတွေနဲ့ သင့်အရောင်းအဝယ်ကို ဝင်ရောက်ရန် အကောင်းဆုံးအဆင့်ကို ဆုံဖြတ်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ အမြတ်ရမည့် အခွင့်အရေးကို နှစ်ဆတိုးလာပါလိမ့်မည်!
လူသစ်များ forex ပညာပေးသင်ကြားရေး နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက်
05.10.2018 12:43 စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်နှင့် ၎င်း၏ငွေကြေး အကျိုးသက်ရောက်မှု
စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်သည် အခြေခံ Forex သုံးသပ်ချက်အတွက် အခြေခံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေကြေးအတွဲတစ်ခု၏ စွမ်းအားသည် နေ့စဉ်ထုတ်ဝေနေသည့်
ပညာရေး သတင်းများနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်း
14.09.2018 13:30 RSIမှာ သင့်ဗျူဟာ တည်ဆောက်ပါ
RSI အညွှန်းကိန်းအား ဗျူဟာများတွင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
21.08.2018 13:00 ဈေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုခြယ်လှယ်မလဲ?
လူသစ် ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးမှ အမြတ်နဲ့ဘယ်လို စတင်ရောင်းဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်ကို ရှာနေပါက၊ သူ/သူမသည်
ပညာရေး အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ trend အရောင်းအဝယ်